.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: SWF to MP3 Converter
Flash Songs ကနေ mp3 ပြောင်းတဲ့ဆော့ဝဲလေးပါ။ သုံးရတာလည်း လွယ်ပါတယ် ။
ဆော့ဝဲဖိုင်ကို ဖွင့်ပြီးတော့ SWF2MP.exe ကိုကလစ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ အပေါ်မှာပြထားတဲ့
ပုံလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ် ။ Add SWF ကိုနှိပ်ပြီးတော့ ကိုယ်ပြောင်းချင်တဲ့ Flash Song ကို ရွေးပြီး
Open ကိုကလစ်ပါ။ပြီးရင် Convert to MP3 ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ mp3 ပြောင်းပါပြီခင်ဗျာ။
သုံးချင်သူများ အောက်မှာ ဒေါင်းသွားနိုင်ပါတယ်။ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေပါစေ။
Posted by Thurainlin at 07:11